Iko kupi kwekudyara mumusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Kusarudza kwekuisa mari mumusika wemari kwakaoma kana iwe usingazive zvinangwa zvako. Dzimwe nguva ndinoona zvichinetsa kuona kwekuzviitira ini pachangu, kwete nekuti ndinoshaya mazano, asi nekuti ndinomirira nguva chaiyo. Uye zvakare, iyo chokwadi chekuti havazi vese investa vanoita zvakafanana pfungwa. Zvimwe zvinotsanangurwa nehurefu hwavo munguva, vamwe nemari yavakadyara, uyezve chinangwa cheiyo mari. Ivo havana kufanana.
Mukana mukuru wenguva dzazvino, kunyangwe paine dambudziko repasirese, ndizvozvo zvizhinji zvezvigadzirwa zvemasheya zvinowanikwa kuruzhinji kazhinji. Uye kana isu tisingakwanise kuisa mari pane izvo zvatinoda zvakananga, tinogona kuzviita nedzimwe nzira. Semuenzaniso, ETF inokwanisa kugadzirisa chikamu chematambudziko aya anodikanwa nemusimari mudiki. Mamwe acho ane chekuita nekudyara muindices, hurumende zvisungo, izvo nenzira yechinyakare zvainyanya kuomarara uye zvaida mari hombe. Nechikonzero ichi, uye zvine hukama nenguva dzazvino, tichaenda kuona zvatingasarudza uye nekwatingaisa mari mumusika wemasheya zvinoenderana nezvinangwa zvinotevera.
1 Sarudzo dzekuziva kupi kwekudyara mumusika wemasheya
2 Chii chekufunga kana uchisarudza kwekuisa mari
2.1 Musiyano uripo pakati pekudyara nekufungidzira
Sarudzo dzekuziva kupi kwekudyara mumusika wemasheya
Iko kune runyorwa rurefu rwezvigadzirwa nezvinhu zvekusarudza kubva mukutengesa nyika. Pakati pezviripo kuti tizive kuti ndeipi chaiyo kwatiri yekuti tingaise mari pamusika wemasheya pane zvinotevera:
Forex: Ndiwo musika wekushambadzira wekunze. Iyo yakazvarwa kufambisa kuyerera kwemari kwakabva mukutengeserana kwepasi rose.
Mbishi Zvishandiso: Muchikamu chino tinokwanisa kuwana zvihombe zvinoshandiswa pakugadzira zvakaita semhangura, oiri, oats uye kunyangwe kofi. Kune zvakare simbi dzakakosha senge goridhe, sirivheri kana palladium mukati meichi chikamu.
Zviito: Iyo ndiyo inonyanya kuzivikanwa nekugona. Mumhando iyi yemusika tinogona kutenga "zvikamu" zvemakambani uye tinobatsirwa nekushanduka kwavo kana kurasikirwa. Zvese zvinoenderana nekambani ine zvikamu zvakatengwa. Isu tinogona zvakare kuwana masheya indices dzenyika senge India.
Mabhiri, maBond uye zvisungo: Uyu musika unoratidzwa nekutenga uye kutengeswa kwezvikwereti zvekuchengetedza, zvese zvekambani nehurumende.
Mhedzisiro yemari: Izvo zvigadzirwa izvo kukosha kwacho kunoenderana nemutengo weimwe nhumbi, kazhinji iri yepasi. Kune akawanda marudzi acho, maCFD, Sarudzo, Nguva, MaWarrant ...
Mari Yekudyara: Mamwe acho anotungamirirwa nemunhu, mamwe nemaalgorithms, uye mamwe anozvishandura ayo anoteedzera indices kana masisitimu ehurongwa hwekudyara. Dzinonyanya kufarirwa dzinowanzo shanda nemasheya, asi dzinogona kuve dzakakumikidzwa kune zvimwe zvigadzirwa senge mbishi zvigadzirwa.
Chii chekufunga kana uchisarudza kwekuisa mari
Pane zvinhu zvakasiyana zvinowona pekuisa mari mumusika wemasheya. Iyo nguva yenguva iyo yekudyara isu yatinoda kutsungirira, iyo nhanho yemubatsiro yatinoteedzera, yakawanda sei njodzi yatiri kuda kutora, nezvimwe.
Nguva yakatarwa: Chikamu chakakura chemafilosofi akasiyana ekudyara anogona kuwanikwa mumatanho enguva atinozvisarudzira. Saka pane kubva pfupi pfupi kusvika kune yakareba. Iyo yakareba-nguva iyo mari inocherechedzwa, zvinowanzoitika kazhinji hazvisi kurasikirwa pamari. Nekudaro, uyu muganhu mukuru une semumwe wekuti hatigone kuwana mari nekukurumidza. Kuve nechokwadi chekuti capital inoshandiswa kwatiri kurarama, zvichatibatsira kuona kuti ndeapi echinguvana kuchinjika kwatinako.
Kuenzana, zvese nezve mashandiro ayo
Kubatsira: Iyo nhanho yemubatsiro iyo inoteedzerwa inogona kusiyana zvichienderana nekambani uye chikamu chakabatwa. Kuvhiya kune imwe nhanho yekusimudzira hakuna kufanana neyakagadziriswa mari yekudyara. Iyi bhonasi yekuita mari inowanzo kuperekedzwa nenjodzi dzakakwira. Mukushanda pamwe nekukwiridzira, guta guru rinogona kurasikirwa kana kutowedzera zvakapetwa kaviri, nepo mune rechipiri, mari yakatarwa yemari, zvingave zvisingaite (zvisingaiti) kuti chimwe chezviitiko zviviri chizoitika. Kune rimwe divi, purofiti inogona kuwanikwa nekutarisa kwenguva yakareba, kana zvakare nemakambani ane kukura kwakakosha. Kuziva kupi kwekudyara kuitira purofiti yakawanikwa zvine musoro kwazvo.
Njodzi: Ndedzipi kurasikirwa isu isu takagadzirira kutora kune angangove mabhenefiti? Mari yekudyara yakatarisana nenguva pfupi haina kufanana neyakareba-nguva. Kune zviitiko zvakawanda zvinogona kuitika pamusoro penguva yakareba, saka njodzi inogara iripo. Nekudaro, kune zviitiko zveapo neapo zvinoita kuti mutengo wemidziyo uchinje munguva pfupi, saka zvakakoshawo kuti tizive kuti tinogona kusvika kupi. Iwe unogara uchifanira kuteedzera iyo diki njodzi, kuti uve nechokwadi chekuwana purofiti, asi kana iyo njodzi iri yepamusoro, izvo zvinoruramiswa.
Musiyano uripo pakati pekudyara nekufungidzira
Chekupedzisira, uye pachezvayo ndicho chakanyanya kukosha chinhu, zvakakosha kusiyanisa mari kubva mukufungidzira.
Kufungidzira ndiko kutenga kana kutengesa kwechero chinhu netarisiro yekuti ichakwira kana kudzika mumutengo mune ramangwana. Nekudaro, iro basa remufungidziri ndere kufungidzira remangwana mutengo wechigadzirwa chaakatenga. Izvo zvakanyatsojeka kufungidzira, zvirinani mhedzisiro. Rudzi urwu rwekufamba runowanzo kuverengerwa nekuongororwa kwemamiriro ezvinhu, kuongorora kwehunyanzvi, kana chero chiratidzo kana chikonzero chinoita kuti mutengo utarisire. Semuenzaniso, kutenga goridhe netarisiro yekuti ichakwira kana kuisa odha yekutengesa paEurodollar netarisiro yekuti euro icharasikirwa nemutengo, dhora rinowana kukosha, kana zvese zviri zviviri.
Iyo mari inowanzo kuve kutengwa kweaseti pamwe nekariro yekuti kudzoka kwepamusoro kuchagadzirwa yemari yakapihwa. Kana kufungidzira kuchida kuve kunguva pfupi-pfupi (kwete nguva dzose, kune fungidziro yenguva refu), kudyara kunowanzo tarisa kwenguva refu. Panguva ino muzvinashawo anoita akakosha kuverenga uko kwaanoedza kuwana kudzoka pane capital uye zvakare kumuvimbisa nezvazvo. Kana icho chinangwa chikaitika, iyo yakatengwa midziyo inogona kukwira mukukosha kuitira kuti panguva yekutengesa inogadzira izvi zviwanikwa zvemari sezvazvakaita mune yekufungidzira. Semusiyano, iyo yekudzosera iwe yaungave iwe wakawana, semamiriro ezvinhu emakambani mazhinji akanyorwa, iri kuwana kubhadhara kwakabhadharwa nenzira yezvikamu. Iyo yakajairwa iyo mukufamba kwenguva ichafanirwa kuwedzerwa kune iyo capital capital, kuti uone iyo yakazara kudzoka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Iko kupi kwekudyara mumusika wemasheya